Ọzọ, tụlee ndị na-ege ntị. N'elu oke igwe, chee maka ihe ndị na - ege gị ntị mere, ma ọ bụrụ ndị ahịa, njikwa, ma ọ bụ nzukọ sara mbara. A naghị emezi ọtụtụ ihe ngosi maka mkpa ndị na-ege ntị. Kama nke ahụ, e wuru ha site n ’ndị ọkà okwu, mana ọ dị mkpa ịkewaa ndị na-ege gị ntị wee wuo akụkọ gị gburugburu ha. Gịnị mere ha ji nọrọ ebe a? Kedu ụdị ọkwa ọrụ ha na ọrụ ha? Ego ole ha nwere maka nkọwapụta granular, acronyms, ihe ndị ọzọ? Gịnị bụ nchegbu ndị ọkachamara ha, oku ha na-eme? Hà bụ ndị ekwe ekwe ma ọ bụ ndị kwere ekwe? Kedu ụdị nkwụsi ike ị ga-eche ihu? Azịza ga-enye aka kpuchie etu ị ga-esi rụọ oche gị. Na-echebara ndị na-ege gị ntị echiche nke ọma tupu iwu okwu giga - enyere aka bulite mmetụta ya.
Abịa na usoro imepụta ihe dị mfe, iwu kachasị bụrụ nke ị ga - eso iji wulite njikọta gafee oche gị bụ ịmelata mmegharị na ntụgharị. N'ezie, igbochi mmegharị niile iji gbanwee ntụgharị bụ ezigbo usoro isi mkpịsị aka. Ọ gwụla ma ị bụ onye nrụpụta nka ma ọ bụ ihe nkiri, ị kwesịrị ịnọpụ na mmemme PPT na ntụgharị. Nke ahụ kwuru, ịda mbà na-eme nnukwu ihe maka ngosi n'ihi na ha dị mfe, nke a na-ejikarị na fim, mana ọ bụghị cheesy
Ihe ọzọ ha na-eme bụ ụcha ya. N'ihe banyere agba agba, na-ejikarị otu agba n'ogologo, ma ọ bụ ndo nke otu agba, nke ọma na oji / isi awọ. Nwere ike ịsị na ọ na-agwụ ike, mana eziokwu bụ na mmasiri anya na-enweta site na nuance n'iji mkpụrụ akwụkwọ, ọ bụghị n'egwurugwu ederede mara mma. Nleta anya na-esite na nchịkwa, foto ma ọ bụ data. Yabụ rapara na otu mkpụrụ edemede ma ọ bụ abụọ, ma belata ojiji agba. Kwesịrị iji otu agba maka ụdị ahụ niile, yana otu ndo dị iche iche nke otu agba iji mepụta ọkwa.
Anyị elelewo oche ahụ anya n’ụwa niile; ugbu a, anyị ga-ekpuchi slides ọ bụla. Kedụ ka ị ga-esi were slide? Olee otu ị ga - esi hụ na nke ọ bụla nwere etiti nnukwu ndọda na nke ọ bụla? Ọzọkwa, slide ọ bụla ga-aga n'ihu ebumnuche nke oche ahụ. Ọ bụrụ na o meghị, gịnị kpatara ya? Agbanyeghị, slide ọ bụla chọkwara isi ebe ọhụụ. Ekwesịrị inwe ndị isi, nhazi na ihe ngosi iji mee ka ihe ngosi nke onye ọ bụla doo anya, ebe ịkọwapụta ozi dị mkpa karịa nke na-adịchaghị mkpa.
Dị ka ọkwa ndị ọzọ, enwere usoro iji were n'ọrụ na slide. Ihe omuma a na-eji eme ihe eji eme ihe bu iji gosiputa otu echiche. Nsogbu bụ, nke ahụ abụghị mgbe niile pragmatic. Otu echiche kwa slide bụ ụzọ dị egwu maka mkparịta ụka TED, mana ọ naghị arụ ọrụ oge niile maka ngosipụta ụlọ ọrụ kwa ụbọchị, n'ezie ọ bụghị maka nyocha ma ọ bụ ngosipụta dị mgbagwoju anya na ọtụtụ data.
N'ọtụtụ ihe ngosi ụlọ ọrụ, "ihe nkiri slide" bụ ihe a na-apụghị izere ezere. Ihe ngwọta ya bụ nhazi usoro na ndị isi, yabụ kama ilekwasị anya n'otu echiche site na slide, usoro kwesịrị ekwesị kwesịrị ịdị otu echiche n’oge nke ọ bụla n’ime oge. You nwere ike inwe ọtụtụ echiche dị ka mkpa na slide enyere, yana ọtụtụ ozi, mana isi okwu bụ ijikwa uche ndị na-ege ntị n'oge ọ bụla n'oge. Nke a bụ maka ịkọwapụta ezigbo njikọ dị n'etiti visuals na okwu ọnụ, iji jide n'aka na ndị na-ege ntị enweghị mgbagwoju anya. Visuals na okwu kwesịrị jikọọ n'ụzọ doro anya mgbe niile.
Tactzọ ọzọ - mfe. Ma eleghị anya, ọ bụ ntakịrị ihe na-achọsi ike, mana imewe dị ọcha dị jụụ. Nchịkọta na idezi ihe dị mfe. Ọ bụrụ na ị na-enwe obi abụọ, mkparị ahụ ga-abụ ibelata na itinye obere karịa karịa na slide ọ bụla.
Osimiri bụ atụmatụ ọzọ eji akọ arụ. Ọ bụ mmadụ ole na ole na-adịghị echepụta ihe ngosi maka ibi ndụ na-elekwasị anya n’ichebe oke gburugburu gburugburu, n’elu, aka ekpe na aka nri. Site n'echiche m, oke dị n'etiti ngwaọrụ ndị kachasị mkpa dịnụ. Gbalịsie ike ichekwa oke oge niile, ọbụlagodi na ọ pụtara eserese, ederede, foto na ihe ndị ga-eme ka ha dabaa ma chekwaa oke n'akụkụ ya.
Nke mbụ, kweta na data ahụ bụ nwa gị. You na-etinye imerime awa na ego na-emepe emepe data na nyocha gị, ma ịchọrọ ịkekọrịta ya. Nsogbu bụ, ọ dịghị onye na-eche banyere ihe dị ukwuu banyere nwa gị (n'agbanyeghị ole foto ụmụaka ị kesara), ọ dịghịkwa onye na-eche banyere ihe gbasara data gị. Mgbe ha na-ewepụta ọrụ ha, ọtụtụ mmadụ na-ekpuchi data maka na ha achọghị iduhie ma ọ bụ ghahie, ma nke kachasị mkpa bụ na ha achọghị ịhapụ ihe ọ bụla dị mkpa. Nke ahụ kwuru, tụlee isi ihe dị mkpa dị ka ọrụ gị dị ka onye na-eweta okwu bụ mmeju, na-enye ihe ọmụma nghọta karịa ị lie ndị na-ege ntị na ya.